I-CHERRY BLOSSOM TATTOO MEANING - ZITHINI IICATRY FLOWER TATTOOS? - IITATTOOS
I-Cherry Blossom Tattoo Meaning - Zithini iiTattoos zeentyatyambo zeCherry?
Intyatyambo ye-cherry, ekwabizwa ngokuba yi-sakura, yenye yeempawu zenkcubeko ezihlala ixesha elide eJapan kunye noyilo olubalulekileyo lwe tattoo olunxulunyaniswa nobuhle, ukuqala okutsha, kunye nokungagungqi.
Ngelixa uyilo lwetsheri luyintyatyambo olunempembelelo kubugcisa bemveli bomzimba waseJapan, intyatyambo yecherry ihlala isebenza kakhulu xa ifakwe kumacandelo amakhulu njengomfanekiso wesibini ukongeza umaleko wentsingiselo efuziselayo kwinto yonke
Iinjongo zobuhle, i-hanami (ukonwabela iintyatyambo ze-cherry zihluma), kunye nokuqala okutsha okuxhaphakileyo kubugcisa besikolo esidala sottoo ngoku kuyasetyenziswa kuyilo lwe tattoo lwangoku olubonisa umthi wecheri okanye amasebe, kunye noyilo oluncinci kunye nolwanamhlanje isicelo.
Inqaku elilandelayo liza kucacisa intsingiselo yetyatyambo yetsheri kumxholo ekufuneka ukuvumele ukuba ufumane ugqozi olufanelekileyo lokwenza ukhetho lwakho lwe tattoo.
ICherry Blossom Symbolism kwiTattoo yaseJapan yesiNtu
Uyilo lwesiko laseJapan lubonisa umbala otyebileyo, ukuzaliswa okunzima kunye noyilo lwesibindi oluhlala luhlanganisa indawo ezinkulu zolusu.
I-cherry blossom tattoo ngamanye amaxesha isetyenziswa njengendawo ezimeleyo yobugcisa bomzimba kodwa kunokwenzeka ukuba isetyenziswe ngumzobi we tattoo ukugxininisa iintsingiselo ezahlukeneyo kwimixholo yendabuko yaseJapan kunye nemifanekiso.
iitattoo zangasemva zabafana
1. Iziqalo ezitsha
Uyilo lweCherry luyilo lwe tattoo luhlala lubonisa intyatyambo okanye ukudubula kwentyatyambo ishukunyiswa ngumoya kude nomthi wecherry, nokuba yeyona nto iphambili kuyo ( shudai ) okanye njengeqhekeza lobugcisa elixhasayo.
Ukuzoba itattoo yesiko laseJapan kule ndlela kuhlala kuyindlela yokubonisa isiqalo esitsha okanye isiqalo esitsha, kunye nesicelo esithandwayo sesimbo esisetyenziselwa iingcinga zeentyatyambo ze-sakura zangoku.
Isebe leentyatyambo ze-cherry, intyatyambo ye-cherry, okanye ngamanye amaxesha i-petal enye, inokumiliselwa kwiithoni ezipinki kunye nezityheli, ezimnyama ezimnyama nezimvi, okanye inki yemveli eqaqambe ngokucacileyo ukwenza umvambo mhle obonisa ukuqala ngokutsha.
2. UHanami: Umxholo wokungagungqi kunye nobuhle obudlulayo
Enye intsingiselo ephambili yokomfuziselo ehlala isetyenziswa xa kusetyenziswa intyatyambo yecherry okanye ipetal kuluhlu loyilo lwe tattoo sakura ngumbonohanami .
UHanamiichazwa njengesiqhelo okanye isiko lokujonga iintyatyambo ze-cherry xa zisentyatyambo epheleleyo, kwaye sisenzo esihambelana nokunandipha indalo yobuhle obungapheliyo.
Umthi we-cherry uqhakaza ixesha elincinci kwaye ubhiyozelwa ngamaqela aqhakazayo (ohana-mi), apho abahlali kunye nabakhenkethi bahlala phantsi kweentyatyambo ukonwabela inkampani enkulu kunye nobuhle obudlulayo beentyatyambo ezipinki okanye ezimhlophe.
Njengoko kuhlala kuyindlela yaseJapan, uHanami ngumbono obhiyozelwa irezumi. Intyatyambo yecherry kunye nokuntshula komthi wecherry zizafobe zohlobo lobomi obudlulayo obusongwa bube ziitattoos, ukusuka kwigorha le-samurai elixubusha elicinga ngokufa ukuya kubukeka kunye nezakhono ze-geisha courtesans, okanye ubundlobongela beedragons.
3. IiTattoos zaseJapan: Zinkulu ngobukhulu kunye neSikali
Iitattoos kwinkcubeko yaseJapan (ehlala iphikisanayo sisininzi soluntu) zakhiwa yiYakuza, i-mafia yaseJapan, njengeempawu ezazikho ngaphandle koluntu.
iiTattoo zengalo ezincinci zabafana
Ubugcisa be tattoo buka Yakuza buhlala bunobukhulu obukhulu-umva opheleleyo, isifuba, kunye noyilo lwe tattoo emkhonweni- oko kuthetha ukuba imifanekiso emininzi yesibini inokongeza ubume bentsingiselo ye-inki.
Amaxesha amaninzi, intyatyambo keshoubori, enjengeentyatyambo ze-lotus, i-chrysanthemum, okanye intyatyambo ye-cherry ifakwe kwisicatshulwa esikhulu sasemva okanye i-sleeve tattoo ukongeza intsingiselo kumbono ophakathi.
Izinto - umoya, umlilo, umhlaba, amanzi, umoya - nazo zibaluleke kakhulu ekugcwaliseni nasekuxhaseni umxholo omkhulu (shudai) we-irezumi, ngumoya namanzi kuba liqabane elithandwayo lokubonisa ubuhle bokuyilwa kweentyatyambo ze-cherry okanye Umvambo welotus.
4. I-Cherry Blossom kunye neKhayi Tattoo Intsingiselo
Uninzi lwabantu lukhetha ukufaka enye into ebadass kuyilo lwentyatyambo yecherry: itattoo yokhakhayi.
Ukhakhayi ziimpawu ezinamandla zokufa kwethu kunye nexesha elilinganiselweyo emhlabeni, kwaye zizongezo ezifanelekileyo kwimibono yobumbano xa usabelana ngolusu neentyatyambo ezintle ze-sakura.
Abanye basenokucebisa ukuba le tattoo ibonisa ubuhle ebomini nasekufeni okanye ukwahluka kumbono wokulungileyo ngokuchasene nobubi.
5. Ukudibanisa iiTattoos zaseJapan zaseCherry Blossom
Kwirezumi yesiko, i-sakura ihlala ibonakaliswa njenge-motif yesibini (keshoubori) motif, apho bakhela khona kwi-tenet yoyilo esembindini.
Imixholo yeetattoo eyaziwayo esembindini enokusebenzisa iintyatyambo zecherry zibandakanya:
Hannya imaski tattoos
IKitsune (iiTattoo zaseJapan zeempungutye)
Obunye ubugcisa be tattoo yentyatyambo yaseJapan
Enye imiba ephambili yoyilo lweentyatyambo zaseJapan kukuba amaxesha onyaka ayadibana kwaye ahamba ngokufanelekileyo; njengoko zisenza njengoko zityaliwe, ziqhakaza, kwaye zikhula kuwo wonke umjikelo wobomi bazo.
Uya kufumanisa ukuba uninzi lwezinto eziphambili ekukhetheni uyilo ziyahambelana namaxesha onyaka, ukusuka kumfanekiso ophambili ukuya kubugcisa bomzimba obuxhasayo, yonke indlela ukuya ezantsi kwimifanekiso yokugcwalisa kwimikhono yeetattoos kunye neziqwenga ezinkulu zetattoo yangemva.
I-Cherry Contemporary Blossom Intsingiselo kubugcisa beTattoo
Sebenzisa umbono we-cherry blossom tattoo akusekho kwi-irezumi yesiko, kodwa kuthandwa kakhulu kwezinye iindlela.
Umzobi we tattoo ngoku unokufaka zonke iintlobo zesimbo sesitayile ekusetyenzisweni kwe-cherry blossom tattoo design umbono, ukusuka kwitattoo encinci petal ukuya kwiingcamango ezinkulu ezingabonakaliyo.
6. Ubugcisa obuncinci beCherry Flower Tattoo
Umthombo: @ashleytysontattoo nge-Instagram
Isitayile esidumileyo sokuyila nabaqokeleli ababhinqileyo belixesha, abo bathanda ukukhetha ubugcisa obunemizimba esemgangathweni ngaphezulu kwezitayile zoyilo zemveli, kukho ubuchule obukhulu obunokubakho kwindawo yetattoo encinci yanamhlanje.
iinwele ezimfutshane ziphelile
Ngoluhlu olunje lwezitayile, usetyenziso, kunye nemibala ekunikezelweni, itatoo encinci yeentyatyambo ze-cherry ixhaphake kakhulu kwaye inokudityaniswa kwiindawo ezininzi, ukusuka kwisikristsi sangaphakathi kunye nengalo yomqala, isifuba, nasemva kwendlebe.
Iintyatyambo ezincinci zomthi we-sakura kunye ne-sakura zilandele imikhwa yakutshanje kunye nabaqokeleli abaxuba izikhundla zakudala ezinendawo ezothusayo nezibonakalayo zomzimba, ekhokelela kuyilo oluntsonkothileyo lwesebe leentyatyambo ze-cherry kunye neziqwenga zentyatyambo zecherry ezichaza ubuhle beentyatyambo.
Umthombo: @frank_ifa nge-Instagram
7. Isebe kunye neCherry Tree Tattoo Intsingiselo
Iinjongo zobuhle, i-hanami, kunye nesiqalo esitsha esixhaphakileyo kubugcisa be-sakura ye-art yesikolo esidala ngoku siyasetyenziswa kwii-tatoos zangoku ezinomthi weentyatyambo ze-cherry okanye amasebe angatshatanga aqholiweyo nge-cherry bloom.
Imithi yaziwa njengoyena mqondiso wokugqibela wobuhle obomeleleyo kunye namandla angapheliyo ekuhambeni kwexesha. Benza ukhetho olunendilisekileyo nolunesidima kuyilo lwetsheri lwangoku.
Rhoqo umzobi we tattoo ubonakalisa i-tattoo yomthi we-sakura njengomfanekiso ophambili, ngokuchaseneyo neetattoo zemveli zaseJapan, ezikhulu, zinemibala ngakumbi, kwaye ziyilo oluxakekileyo ngokubanzi.
8. Ubunyani beCherry Blossom Tattoo Art
I-tattoo yokwenyani, entle ye-cherry yintyatyambo ekhethiweyo ebiza ingqalelo ngokukhawuleza kuyo kwaye ishiye umbono ocacileyo kubo bonke abajongayo.
Izisa ubumnandi bendalo bentyatyambo yecherry kwaye ivumela ithuba lokusebenzisa uyilo olunobunkunkqele njengokubeka kunye nombala ukuba ugxininiswe.
I tattoo yokwenyani yenza ilogo ebonakalayo phakathi kwalowo uyinxibileyo kunye nombukeli kuba nanini na xa umbukeli ejonga kubugcisa, ubugcisa bujonga kanye ngasemva.
9. I-Neo-yesiNtu yeCherry Blossom Tattoo eyiNtsingiselo
mens umthi wobomi tattoo
I-Neo-yendabuko yeentyatyambo zeentyatyambo ze-tattoo zisondele ngokwaneleyo ukuba ziyinyani ukuba zamkelwe, okanye iikhonsepthi ezingabonakaliyo ezixhasa umxholo ophakathi kunye nomxholo, umbala, okanye nokubekwa.
Amaxesha amaninzi, i-neo-yesiko le-cherry intyatyambo ye tattoo inokuza kwi-kaleidoscope yemibala kunye neemilo ukuyenza icace ngakumbi kwaye inomdla, ngelixa isadityaniswa nomxholo wendabuko woyilo
Imifanekiso edityanisiweyo kunye nentsingiselo yokomfuziselo zibonelela ngengqondo yokuqaqamba kunye nobuhle obunokubakho kuphela ekucingeni komculi we tattoo.
10. I-Cherry Blossom Tattoo Designs elula kunye ne-Minimalist
Umthombo: @juan_zombies nge-Instagram
Ukutolikwa okulula kwentyatyambo yecherry kwenza ukhetho lwetatoo oluthandwayo lwanamhlanje.
Intyatyambo enye ye-cherry ewileyo okanye umgca we tattoo owenziwe lula wesebe lecherry kakuhle kunye neengcinga zesiko lobuhle, impermanence, kunye nobufazi, ezenziwe nje ngokwahlukileyo.
Ukulula kokuyila kubeka ugxininiso olukhulu kwinto yokuba ukuqhakaza kuthetha ntoni kuwe buqu.
Umthombo: @jun_shyan nge-Instagram
I-Cherry blossy uyilo lwe tattoo luphawu olubalulekileyo ngaphakathi kwenkcubeko yaseJapan kunye nobugcisa be tattoo esele ithandwa kwi-inki yanamhlanje.
Ngokuphonononga izinto ezininzi ezahlukeneyo ngaphakathi kobugcisa bomzimba obukhulayo, uya kuba nakho ukufumana isiqwenga esifanelekileyo ukuthwala ulusu lwakho ngokusisigxina. Intyatyambo ingayilwa uyilo oluphambili okanye isiqwenga sephazili somqondo wakho.
Bona ngakumbi malunga - I-Tattoo kajongilanga intsingiselo-Zithetha ntoni iiTattoos zikajongilanga?
ii-braids ezingatshatanga nezinwele zendalo
Umvambo wekati omnyama nomhlophe
imikhono yeentyatyambo emnyama kunye nomhlophe
Iifashoni zaseKorea zamadoda zefashoni 2020
Yintoni oza kuyisebenzisa endaweni ye-lattice phantsi komgangatho
Izinto umntu ngamnye afanele ukuba nazo nge-30